2022.01.20 - Somalisch - "Verblijfsdocument"
Guri > Dokumentiga joogitaanka
Haddii lagu siiyo oggolaasho joogitaan, waxaa xitaa lagu siinaayaa dokumenti joogitaan (verblijfsdocument). Dokumentigaas waxaa xitaa lagu magacaabaa haystaha kaarka kuwa loo fasaxay ama kaarka oggolaashada. Kaartaasi waa in aad adiga shaqsi ahaan uga soo qaadataa IND-da. Waa in adiga oo website-ka IND-da adeegsanayaa aad ballan ka qorsheysataa. Qorshaha ballanta waxa aad un ka sameysan kartaa adiga oo website-ka adeegsanaayo. www.ind.nl/afspraken . Ku tala gal in aad adiga mar kasta iska tegi karin qaabiladda rugta-INDda. Balse ay tahay in aad hore ballan u soo dhigato, taasi oo ah 14 maalmood gudahood keddib marka qoraalka casumaadda aad hesho. Waa in aad kaarkaada tustaa xiriiriyahaada ee COA-da.
Dokumenti joogitaan waa dokumenti dhaxal galna ah muhiimna ah. Kaarkan waa midka aad Nederland gudaheeda u adeegsan karto aqoonsi ahaan: waxaa aad ku caddeyn kartaa yaa tahay adiga. Adiga kaarkan ayaad u baahan tahay si aad u fuliso arrimahaada muhiimka ah ee la xiriira u guuristada degmada. Tusaale ahaan waxa aad kaarka u baahan tahay marka:
•aad heshiiska kirada saxiixeyso
•aad xisaabta bankiga ee shaqsiga ah codsaneyso
•aad lacagta shaqo laawayaasha codsaneyso
•aad ceymiska caafimaadka codsaneyso
•dooneyso in aad xirfad barsho iska qorto
•shaqo aad raadineyso
Kaarka joogitaanka la'aantii intaan oo dhan kuuma hirgaleyso. Kaarkan la'aantii dib u dhac ayaa ku imaanayo u guuristaada xagga degmada.
Soo qaadashada verblijfsdocument
Waxa aad qoraal casuumaad ah ka heleysaa Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) marka uu dokumentigaada joogitaan diyaar yahay. Halkaas waxaa ku yaal xafiiska - IND oo aad ka soo qaadan karto dokumentiga joogitaan. Iyo waraaqaha aad guud ahaan hore u sii qaaaneysaa. Google Maps waxa aad ka arki karta sida aad xafiiska -IND ku tegi karto. Waa in aad dokumentigaada joogitaan aad shaqsi ahaan uga soo qaadataa IND. Qof kale ma kuu sameyn karto taasi. Haddii aad lammaane,ilmo iyo/ama xubno kale oo reerka leedahay, iyaga xitaa waa in ay iskooda dokumentigooda u soo qataan. Kharashka safarka waxaa ku magdhabeysa COA (marka masaafada si socodka ay ka dheer tahay 10 kilometer).
Waxaa dhici karta in si toos ah marka go'aanka oggolaashada lagu siiyo dokuminti joogitaan. Markaa uma baahnid in aad si gooni ah u soo qaadato.
Verblijfsdocument waa kaarkaada-Aqoonsi oo rasmiga ah ee Nederland.
Dit document is afkomstig van https://www.mycoa.nl, zie https://www.mycoa.nl/so/print/infosheetprint/1528